समाज Archives - Page2of 62 - News 88 Post
भीम रावल यस कारण होईनन् राष्ट्रवादी नेता, एमसीसीको विरोध नक्कली
July 31, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on भीम रावल यस कारण होईनन् राष्ट्रवादी नेता, एमसीसीको विरोध नक्कली
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद तथा पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावलले शुक्रवार प्रतिनिधी सभामा विशेष समय लिएर अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताको चर्को विरोध गरे । एमसीसीसँग जोडिएका सबै सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न माग गर्दै उनले त्यससम्वन्धि भएका गोप्य सम्झौता पनि पेस हुनु पर्ने वताए । ‘एमसीसीसँगको नेपाल सरकारले गरेको […]
श्रीपेच लगाउने शीरमा हेल्मेट सुहाउँ’दैन भन्दै पारस शाहको समर्थनमा हजारौं युवा स’डकमा
July 31, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on श्रीपेच लगाउने शीरमा हेल्मेट सुहाउँ’दैन भन्दै पारस शाहको समर्थनमा हजारौं युवा स’डकमा
काठमाडाैं । पूर्वयुवराजाधिराज पारस शाहको समर्थनमा आज दिउँसो काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित चक्रपथमा राजावादी र राष्ट्रवादीहरुले टा’यर बा’ल्ने सुर झिकेका छन् । हिजो साँझ चक्रपथको नारायणगोपाल चोकमा हे’ल्मेट नलगाई मोटरसाइकल हु’ईंकाएकाले पारसलाई प्र’हरीले नि’यन्त्रणमा लिएको थियो । प्र’हरीले सम्झाई बुझाई गर्दासमेत औंला ठ’ड्याउँदै त’थानाम भनेका पारसलाई एक छिनपछि स्थानीय युवाहरुले छु’टाएर घर पठाइदिएका थिए । हिजो साँझदेखि […]
यी चार राशी भएका व्यक्तिहरूमा हुन्छ विशेष खुबी, जसले भविष्यलाई बुझ्ने क्षमता राख्छन्
July 31, 2021 N88LeaveaComment on यी चार राशी भएका व्यक्तिहरूमा हुन्छ विशेष खुबी, जसले भविष्यलाई बुझ्ने क्षमता राख्छन्
आधुनिक युगमा ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्ने भन्दा पनि आफ्नो कर्मलाई विश्वास गर्नेहरुको संख्या बढेको छ । धेरैले अहिले ज्योतिषसँग खासै सरोकार पनि राख्दैनन्, तर ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसको जीवन राशी अनुसार चल्छ भनिएको छ । राशीले मानिसको गृह वा नक्षत्रमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिने गर्दछ । सत्य कुरा के हो भने […]
July 31, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on यस्ताे छ रुद्राक्षको धार्मिक र वैज्ञानिक चमात्कारीक फाइदा, पढेर ॐ लेखि शे’यर गरौं
हिन्दू धर्म संस्कृतिमा रुद्राक्षको महत्व विशेष रुपमा रहने गरेको छ । रुद्राक्षले मानिसमा हुने कुनै पनि हा’निकारक ऊर्जाबाट बचाउने विश्वास गरिन्छ । यसको प्रयोग तपस्वीले मात्रै नगरी सांसारिक जीवनमा रहेका व्यक्तिले पनि गर्छन् । रुद्राक्षको माला लगाउनु धार्मिक महत्वका साथसाथै वैज्ञानिक रुपमा पनि लाभदायक हुन्छ । रुद्राक्ष लगाउनाले शरीरमा सकारात्मक प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । […]
के तपाईलाई ॐ को वास्तविक अर्थ थाहा छ ? जान्नुहोस्
July 30, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on के तपाईलाई ॐ को वास्तविक अर्थ थाहा छ ? जान्नुहोस्
सनातन हिन्दू धर्ममा उच्चारण गरिने सबै मन्त्रको सुरुवात ॐ बाट नै गरिन्छ । यो शब्द तपाई हामी सबैले सुनेका छौँ र प्राय हामी सबैले प्रत्येक दिन जप्ने पनि गरेका छौँ । घरमा पूजा गर्दा होस् वा कुनै शुभ कार्य गर्दा होस् वा मन्दिरमा पुजारी व्राह्मणहरूले पूजा गर्दा ॐ भनेपछि मात्रै अन्य काम शुरु गर्छन् । […]
यी ७ गुण हुने पुरूषप्रति आकर्षित हुन्छन् महिला वा केटीहरू
July 30, 2021 N88LeaveaComment on यी ७ गुण हुने पुरूषप्रति आकर्षित हुन्छन् महिला वा केटीहरू
काठमाडाैँ । हरेक महिलाको चाहना हुन्छ आफ्नो पुरुष पार्टनरमा राम्रो खुबी होस भन्ने । पुरुषहरुको केही गुणहरुकै कारण महिलाहरु उसप्रति आकर्षित हुने गर्दछन् । यो स्वाभाविक र दुनियाको सर्वमान्य कुरा पनि हो । महिला वा केटीहरुलाई पुरुषको कुन कुराले बढी आकर्षित गर्दछ भनेर थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानहरु समेत भएका छन् । बिभिन्न अन्तराष्ट्र्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा यसबारेमा […]
कुन महिनामा जन्मिने व्यक्ति कति धनी ? थाहा पाउनुहाेस्
July 30, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on कुन महिनामा जन्मिने व्यक्ति कति धनी ? थाहा पाउनुहाेस्
१. बैशाख महिनाः बैशाख महिनामा उत्पन्न हुने मानिस भोगी (सर्वसुखयुक्त), धनवान, राम्रो चित्त र बिचार भएका, क्रोधवान, सुन्दर आँखा भएका, रुपवान, स्त्रीहरुलाई माया गर्ने स्वभावका हुन्छन् । २. जेठ महिनाः जेठ महिनामा जन्मिएका मानिसहरु विदेशमा बस्ने, शुभ चित्त र लामो आयु भएका व्यक्ति हुन्छन् । ३. असार महिनाः यो महिनामा जन्मिएका मानिसहरु धर्मात्मा, धन नाश […]
एमालेमै फर्किन माधव नेपाल तयार : यस्तो छ एकताको खा’का,
July 30, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on एमालेमै फर्किन माधव नेपाल तयार : यस्तो छ एकताको खा’का,
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ । आज बसेको बैठकमा पार्टी एकताको लागि ग’म्भीर भएर लागिपर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । त्यस्तै, पार्टीमा दुई अध्यक्ष बनाएर आगामी महाधिवेशनसम्म लैजानेगरि छलफल चलेको छ। यसअघि एमाले वि’वाद समाधानको लागि कार्यदलले १० बुँदे खा’का अघि सारेको थियो । […]
अहिलेसम्म कसैले पढ्न नसकेकाे २५० पृष्ठकाे रहस्यमयी पुस्तक ! आखिर के छ त्यस्ताे ?
July 30, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on अहिलेसम्म कसैले पढ्न नसकेकाे २५० पृष्ठकाे रहस्यमयी पुस्तक ! आखिर के छ त्यस्ताे ?
एजेन्सी । संसारमा कतिपय यस्ता र’हस्य छन् जसलाई पार लगाउन अहिलेसम्म कसैले पनि सकेको छैन । यस्तै रह’स्यको गु’त्थीको रुपमा रहेको छ २ सय ४० पेजको एउटा पुस्तक । यो पुस्तक अहिलेसम्म कसैले पनि पढ्न सकेको छैन । इतिहासकारहरुका अनुसार यो रह’स्यमय किताब ६ सय वर्ष भन्दा पनि पुरानो हो । यो किताब १५ औँ […]
नक्कली बाबु छोरी बनेर नागरिकता !
July 30, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on नक्कली बाबु छोरी बनेर नागरिकता !
काठमाडौ । बाबु छोरीको नाता पवित्र मानिन्छ । तर कतिपय भने पैसाको लोभमा यस्तो नातालाई नै बदनाम गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये पर्साका धुरुप प्रसाद पटेल पनि पर्छन् । उनले भारतीय एक नागरिकलाई आफ्नी छोरी भनेर नेपाल सरकारलाई नै झुक्याइदिएका छन् । छोरी बनाएर उनले एक युवतीलाई नागरीकताको प्रमाणपत्र समेत दिलाएपछि उनको करतुत बाहिरिएको हो । […]